हचुवाको सुरक्षा रणनीति : हुलमूलमा गिरफ्तारी, बम हान्नेहरु भूमिगत
काठमाडौं- ११ जना पत्रकार यतिबेला प्रहरी हिरासतमा छन्। निर्वाचनविरोधी गतिविधिमा लागेको अभियोग उनीहरुमाथि छ। केही सार्वजनिक अपराध ऐन अन्तर्गत मुद्दा लगाएर उनीहरुलाई थुनामा राखिएको छ।
उनीहरु कसरी निर्वाचनविरोधी गतिविधिमा लागे ?
प्रहरीले प्रमाण जुटाउन सकेको छैन।
उनीहरु जस्तै करिब ६ सय व्यक्तिलाई बिनाप्रमाण प्रहरीले निर्वाचनविरोधी गतिविधि गर्न सक्ने आशंकाकै भरमा थुनामा राखेर मुद्दा चलाइरहेको छ। तर, सर्वसाधारणकै ज्यान ज्याने र घाइते बनाउने गरी विस्फोट गराउनेहरु भने पक्राउ पर्न सकेका छैनन्।
निर्वाचन सुरक्षाका नाममा प्रहरीले घटनासँग असम्बन्धित सयौं व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्दा र अपराधमा संलग्नहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्दा चुनावी सुरक्षामा थप आशंका बढ्दै गएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको मंगलबार साँझसम्मको तथ्यांकअनुसार ९ सय ५१ जनालाई मुद्दा चलाएर हिरासतमा राखिएको छ। जसमध्ये ६ सय ८ जना नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध भएकै आरोपमा थुनामा छन्।
प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी मनोज न्यौपाने भने सोधपुछका लागि केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर छाडिएको भए पनि निर्दोषहरुलाई मुद्दा नचलाइएको दाबी गर्छन्।
अहिलेम्म ५० भन्दा धेरै स्थानमा उम्मेदवारलाई लक्षित गरी विस्फोटका घटना भएका छन्। दाङमा त विस्फोटमा परी घाइते भएका म्यादी प्रहरीको उपचारका क्रममा ज्यान नै गयो।
उदयपुर र रौतहतमा भएका विस्फोटमा उम्मेदवार तथा सर्वसाधारण गम्भीर घाइते भए। सोमबार राजधानीमा कांग्रेसका उम्मेदवार गगन थापामाथि लक्षित गरी भएको विस्फोटमा दुई जना गम्भीर घाइते भएका छन्। तर, यी घटनामा संलग्नहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन।
‘यसरी निर्दोषहरुलाई थुन्दा उनीहरुमा राज्यप्रतिको नकारात्मक भावना र आक्रोश झन् बढ्छ,’ एक पूर्व सुरक्षा अधिकारी भन्छन्, ‘गृह मन्त्रालयले कमजोर सूचना संयन्त्रको गल्ती लुकाउन यसरी जभाभावी पक्राउ गरेर थुन्नु गलत हो।’
निर्दोषलाई पक्राउ गरेको उजुरी बढेपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सोमबार विज्ञप्ति नै जारी गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सूचना संयन्त्र असफल
निर्वाचन सुरक्षा बलियो बनाउन नसकेको भनेर प्रहरीको व्यापक आलोचना भइरहेको छ यतिबेला। जसरी प्रहरीको सूचना संयन्त्र कमजोर छ, घटनापछिको अनुसन्धान पनि फितलो देखिन्छ।
नुवाकोटमा कांग्रेस उम्मेदवार डा रामशरण महतलाई लक्षित गरी भएको विस्फोटको घटनामा संलग्नहरुलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन। उदयपुरमा कांग्रेस उम्मेदवार नारायण कार्कीमाथि आक्रमण गर्ने एक जना पक्राउपरेका छन्। दाङ तथा रौतहटमा भएका ठूला विस्फोटमा संलग्नहरुसम्म प्रहरी पुग्न सकेको छैन।
राजधानीमै सोमबारको विस्फोटमा संलग्न भएको आशंकामा पक्राउ परेका सबै छुटिसकेको छन्। वास्तविक दोषी समातिएका छैनन्।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी मनोज नेउपाने भने अनुसन्धानमा समय लाग्ने तर सबै दोषी पक्राउ पर्ने बताउँछन्। सूचना संयन्त्रमा असफल भएपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको भूमिकामाथि समेत आलोचना भएको छ।
कहाँ चुक्यो गृह मन्त्रालय?
सुरक्षा कमजोर हुनुमा गृहको कमजोर सुरक्षा रणनीति नै प्रमुख कारण हो। गृहले स्थानीय तहको सुरक्षा अवस्थालाई आँकलन गरेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको रणनीति बनाएको थियो। स्थानीय तहमा पनि विस्फोटका घटना भएका थिए। तर, ती सामान्य मात्र। मतदातालाई नै त्रसित बनाउने किमिसका थिएनन्।
सोही आधारमा यसपटक गृहले रणनीति बनायो, सुरुमा भएका विस्फोटहरुलाई गम्भीर रुपमा लिएन। उनीहरुप्रति नरम र राजनीतिक व्यवहार गर्‍यो। जब विस्फोटका घटना बढ्दै गयो त्यसपछि मात्र देशभरिका नेकपाका नेता तथा कार्यकर्तालाई पक्राउ गरी थुन्न थाल्यो। त्यसपछि विस्फोट बन्द हुने सुरक्षा अधिकारीहरुको आँकलन थियो। तर, झन् ठूला विस्फोट हुन थाल्यो। उम्मेदवार मात्र होइन मतदाता नै त्रसित हुने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ।
सुरक्षा योजना असफल हुनुमा सूचना संयन्त्रको असफलतालाई नै प्रमुख कारण भएको गृहकै अधिकारीहरुले स्विकारिसकेका छन्। नेकपाको चुनावविरोधी गतिविधिको बारेमा सूचना लिएर ‘प्रोएक्टिभ’ पुलिसिङ गर्न सकेन। गृह मन्त्रालयले समेत सम्हालेका प्रधानमन्त्रीले समय दिन नसक्नु, प्रहरी नेतृत्व कमजोर हुनु र खराब प्रहरीहरुले महत्वपूर्ण कार्यालयको इन्चार्ज पाउनुलाई पनि सुरक्षा खस्कनुको कारण मानिएको छ।
चुनावविरोधी घटनाका रुपमा मात्र लिनु हुँदैन : पूर्वडिआइजी मल्ल
पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल अहिले भएका विस्फोटका घटनालाई सरकारले चुनावविरोधी गतिविधिमा रुपमा मात्र लिन नहुने बताउँछन्।
‘सूचना संयन्त्रमा सबै निकायको कमजोरी देखिसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले भइरहेको घटनाको दोष प्रहरीलाई मात्र दिन मिल्दैन, सरकारले यसलाई फरक तरिकाले नसोच्ने हो भने पछि ठूलो समस्या बन्न सक्छ।’ चुनावपछि पनि यस्ता घटनाहरु हुन सक्ने उनको आशंका छ।
कहाँबाट भित्रिइरहेछ विस्फोटक पदार्थ?
अहिले विस्फोट भइरहेका अधिकांश बम नयाँ भएको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन्। यसले सीमाको कमजोर सुरक्षा अवस्था प्रस्ट हुन्छ।
माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा लुकाइएकाहरु विस्फोटक पदार्थसमेत अहिले प्रयोग भएको आशंकासमेत गरिएको छ।
प्रहरी प्रवक्ता नेउपानेले भने अहिले चुनावविरोधी गतिविधिमा प्रयोग भएका धेरैजसो बम घरेलु भएको बताउँछन्। ‘धेरैजसो तर्साउनका लागि बारुद भरेर राखिएका सामान्य खालका विस्फोटक पदार्थहरु छन्,’
प्रधानसेनापति महारथी श्री राजेन्द्र क्षत्रीद्वारा निरीक्षण भ्रमण सम्पन्न
माग पुरा गर्न प्रधानमन्त्रीले डा. केसीलाई बालुवाटार बोलाए
‘नाईं नभन्नु ल ५’ को गीत रिलिज
अन्ततः कानुनमन्त्रीले रुँदै दिए राजीनामा
पत्रकार सम्मेलनमै रोए कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ